9 Plain Linen Nzvimbo dzepamusoro dzeZhizha | Bezzia
9 akajeka machira machira ezhizha
Maria vazquez | 06/05/2021 18:00 | Chii chandinopfeka
Nezuro takawana iyo mupepeti mutsva naAdolfo Dominguez uye pamusoro payo nemucheka werineni watakareurura wakatipengesa. asi haasi iye oga pamusoro pemachira iyo yatinogona kuwana mune yazvino mafashoni maunganidzwa uye kuratidza sarudzo iyo yatinokupa nhasi.
Mucheka ndewe fiber inokosheswa kwazvo munguva yezhizha nekuti hainamatire uye inotitendera kuti tigare tichitonhorera kunyangwe pamazuva anopisa. Nekudaro, kuve nepamusoro seizvi muwadhiropu zvinoita kunge sarudzo yakanaka. Vanomisa kana maoko mapfupi unosarudza!
Hazvizove zvinonetsa kwauri kuti uwane machira epamusoro mune ezvazvino kuunganidzwa kwemafashoni. Ese ari maviri akadhura-emafemu uye makuru mafemu anoasanganisira iwo mune aya. Haasi ese ari 100% yerineniMuchokwadi, mukusarudzwa kwedu iwe unowana mamwe magadzirirwo mune iro rineni inosanganiswa nemamwe machira, asi nguva dzose mune chikamu chakakura kupfuura 70%.
2 Iwo magadzirirwo
3 Kupi kuvawana?
Mavara echisikigo ivo ndivo vanozivikanwa kwazvo muunganidzwa wemafashoni. Ivo vane mukana pamusoro pevamwe: vanobatana nezvose. Iwo ndiwo anonyanya kuita mabasa pamwe chete neaya erudzi dema. Kunyangwe zvichikwanisika kuti uwane kumusoro uko kuri nyore kuti ushandise zvakanaka mune mamwe mavara akadai akachenuruka pingi kana girini.
Suspender dhizaini yakawanda mukuunganidzwa kwemafashoni. Vanomira pakati pezviitiko zviviri izvi. Kubheja kwekutanga kwekusazvidzora, kwekutwasanuka dhizaini mune asina kwazvakarerekera mavakamira zvisungo zvakangwara kana kuyambuka misana. Wechipiri anotikoka kuti tisarudze zvipfeko zvipfupi uye tishandise semusoro.
Kuti zvigadzirwa zvetambo zvakawandisa hazvireve kuti zvinonetsa kuwana pfupi sleeve machira epamusoro. Pakati peizvi, izvo zvinofemerwa nekugadzirwa kweyekutanga t-shati uye ane akakomberedza kana v-mutsipa mitsipa anomira kunze.
Semazuva ese isu takaita runyorwa kuti iwe ugone tenga nekudzvanya kamwe chete (kana maviri) misoro inopedzisa sarudzo yedu. Iwo anonyorerana kunyanya kumafemu atinogona kuwana mumaguta ese seZara, Mango kana Massimo Dutti, pakati pevamwe.
Yambukira kumashure kumusoro kubva kuZara, mutengo € 17,95
V-mutsipa kumusoro naMassimo Dutti, mutengo € 49,95
Pamusoro nyowani neEseOese, mutengo € 49,90
Mucheka camisole Bondi Akazvarwa, mutengo € 318,10
Girini yerineni yepamusoro naAdolfo Domínguez, mutengo € 99
Yakatsemuka pamusoro Zara, mutengo € 25,95
Vhura back blouse Mango, mutengo € 25,99
Portland pamusoro Naturlinen, mutengo € 60
Wepamusoro zvakadzama ruzivo Massimo Dutti, mutengo € 69,95
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Chii chandinopfeka » 9 akajeka machira machira ezhizha
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve kudzivirira kwezuva